Haweeney loo Qabtay Dembi Tuhun Sharaf Dhac - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Haweeney loo Qabtay Dembi Tuhun Sharaf Dhac
La cusbooneeyay torsdag 26 april 2012 kl 15.59
La daabacay torsdag 26 april 2012 kl 14.18
Sawirle: Johan Nilsson/Scanpix.
Ruux hor leh, haweeney 39-jir ah ayaa loo qabtay fal dembiyeed tuhun sharaf dhac ah ee magaalada Landskrona oo horraantii toddobaadkan qudha looga jaray gabar 19-jir ah, sida lagu shaaciyay laanta idaacadda la iska daawado ee TV4 ee magaalada Malmö. Warkaasina oo ay ciidanka ammaanku xaqiijiyeen.
- Ruuxa la tuhunsan yahay ayaa dhashay sannadkii 1973-dii. Iyadoona gacanta lagu dhigay makhribnimadii shaleyto oo arbaca ahayd xabsigana la dhigay saacaddu markay ahayd fiidnimadii sagaalkii oo rubuc la', sida ay sheegtay sarkaalad u hadashay ciidanka ammaanka Eva-Lotta Hermansson Truedsson.
Dembiga lagu tuhunsan yahay haweeneyda ayaa ah fal di lama fal horseedaya dil, islamarkaana aannu ahayn tuhunka ugu sareeya ee uu yahay midka hoose ee tuhun caqli-gal ah.
Habeenkii qudha laga jaray gabadha 19-jirka ah ayaa gacanta lagu dhigay walaalkeed oo 16-jir ah, iyadoona lagu tuhmayey fal-dembiyeed dil sharaf dhaceed. Isla sidoo kale wiilka lagu tuhunsanaa dembi caqli-gal ah ee dil.
Waxaa jira tuhun aad loo tuhunsan yahay in gabadha loo dilay maadaama la qabey iney fal sharaf dhac ah geeysatay. Kuleeylihii hore ayay gabadhu ka soo baxsatay dalkii ay asal ahaan ka soo jeeday oo waalidkeed geeyeen si khasab ahna loogu darey nin iyada ka da’ wayn. Xilligaasi oo gabadhu 14-jir ahayd.
Dil ku salaysan sharaf dhac
Ashtakeyn lagu Oogey Degmada Landskrona
torsdag 3 maj 2012 kl 00.00